Hay’ado caalami ah oo Soomaaliya ka taageeraya tayada iyo mashaariicda waxbarasho ee dalka – Bandhiga
Hay’ado caalami ah oo Soomaaliya ka taageeraya tayada iyo mashaariicda waxbarasho ee dalka
Xubno ka socda hay’addaha deeq bixiyaasha ayaa magaalada Nairobi kula kulmay kala Wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdulahi Goodax Barre, waxaana kulamadaasi diiradda lagu saaray sidii loo hormarin lahaa waxbarashada dalka.
Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa kulanka hore la qaatay Mr. Kevin Smith, Ms. Rina Dhalal iyo Dr. Iiman Yarow, oo ka socda hay’adda USAID, waxana ay ka wada hadleen , sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta iyo sidii looga miro dhalin lahaa mashaariicda waxbarashada.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa saraakiishaasi kala hadlay mashruuc waxbarasho oo ku saabsan xoolo dhaqatada iyo meelaha miyiga ah kana socda gobolada sida Gedo, Bay iyo Bakool oo ay maalgalisay USAID ayna hirgelinayso UNICEF, waana mashruuc tijaabo ah oo la doonaya in laga hergeliyo goballada dalka
Sidoo kale wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa kulmay Phuong T Nguyen oo ah madaxa qaybta waxbarashada UNICEF ee Soomaaliya, waxana ay ka wada arinsadeen , mashaariicda UNICEF kala shaqeyso dowladda.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa sidoo kale magaalada Nairobi kulamo kula qaatay xubno ka socda Bangiga Adduunka kuwaasoo uu hogaaminayay Mr, John Randa ku simaha u qeybsanaha Banka Adduunka ee Soomaaliya iyo madaxda mashariicda Geoff Handley, waxana labada dhinac ka wada hadleen fulinta mashaariicda waxbarashada.
Ugu dambeyn Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa la kulmay madax ka tirsan hay’adda VCT oo GPE da u qaabilsan dhanka gabadha Soomaaliya Ms. Josephine Lutta Kiyenje iyada oo ku sugan Washington DC, kulankan waxaa goob joog ka ahaa xubno ka socda midowga yurub iyo USAID.
Sidoo kale waxaa laga wada hadlay qaabka looga faa’idaysanayo qoondada cusub ee GPE ga oo dhan USD 27.9 million, wasiirka waxbarashada ayaa u sheegay xubnaha deeq bixiyaasha in wasaaradda ay dadaal ugu jirto sidii ahmiyadda koowad loo siin lahaa waxbarashada si la kordhiyo miisaaniyada dowlada ee dhanka waxbarashada lana gaarsiin doon inta udhaxaysa 7% ilaa 10% sandka 2019-ka.